Clean Yangon to make Yangon Clean and Green
May 29, 2020 Clean Yangon
Yangon is the commercial city of Myanmar with over5million people residing. It hasamix of British colonial architecture, modern high-building, and Buddhist pagodas. But, the beauty of Yangon city was distracted by many factors such as trash and betel nut spiting.
အင်္ကျီ (၁) ထည်ဝယ်ပြီး သစ်ပင် (၁) ပင်စိုက်ကြစို့
အင်္ကျီ (၁) ထည်ဝယ်ပြီး သစ်ပင် (၁) ပင်စိုက်ကြစို့ ဇွန်လအတွင်း စိုက်ပျိုးပေးသွားမှာပါ။ ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ Green Yangon, Green Myanmar အင်္ကျီတစ်ထည်ကို (၇၅၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူပေးပြီး ကျွန်တော်တို့က ရရှိတဲ့အမြတ် (၃၀၀၀) ကျပ်နဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က Clean Yangon ကနေပြီး မိတ်ဖက်ပရဟိတအသင်းများစွာနဲ့ Go Green Challenge လုပ်ခဲ့တာ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တိုက်ကြီးမြို့၊ ချောင်းကျိူးကျေးရွာက၊ အာစိဏ္ဍသိရီပရဟိတကျောင်းဝန်းထဲ စိမ်းလန်းသာယာဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါပဲ။
ကမ္ဘာမြေကို သာယာလှပစိမ်းလန်းစေချင်တဲ့ စေတနာရှင်များရဲ့ စုပေါင်းအလှူပါ
Green Yangon အင်္ကျီလေးတွေ ဝယ်ယူအားပေးကြသော ကမ္ဘာမြေကို သာယာလှပ စိမ်းလန်းစေချင်တဲ့ စေတနာရှင်များရဲ့ စုပေါင်းအလှူပါ။
green myanmar မျှဝေဖေးကူဒို့အတူ စစ်ဘေးရှောင် yangon-dev yangon donation CleanMyammar စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ CleanYangon ecobrick BirthdayWish CleanMyanmar အာဟာရဒါန မျှဝေခြင်းသည်မေတ္တာ TogetherWeCan ဒန်ပေါက်ထမင်း greenyangon water ကလေးများအတွက်လက်ဆောင် football Computer blood SaveDolphin volunteers aungsan ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု